Vol. 14 DECEMBER, 1911. No. 3
ILAALINTA CARRUURTOOYINKA LOOGU TALAGALAY DALKA WAXAA LAGA YAABAA IN LAGA HELO Inkasta oo ay fadhiyeen dabkoodii habeenkii, iyo, sida caadiga ah, rabay arrintan ama in, a fairy u muuqday oo wuxuu ku yidhi, in la ogaado sida ay u jecel yihiin in ay rabitaan ay u riyaaqay waxay u timid si ay u siiyaan saddex kaliya rabitaan ah. Waxay ku faraxsanyihiin oo ayan wakhti lumin inay bixiyaan deeqda deeqda ah ee loo yaqaan 'test', nin da 'weyn, oo codkiisa si degdeg ah ugu roonaaday qalbigiisa ama caloosha, wuxuu u rajeeyay inuu haysto saddex xabbo oo daadi madow; iyo, hubaal ku filan, dhabta dhabta ah waxay ahaayeen saddexda yaryar ee daadinta madow. Dumarka waayeelka ah, oo xishoonaya, inay qiimo badan u helaan inay helaan wax ay u jecel yihiin, iyo inay muujiyaan niyadjabinta nin da 'weyn ee fekerka ah, waxay ku rajo waynayd, in daadinta madow ay sanqadhiisu ku dhegto sankiisa, oo ay ku dhufatay. Ka cabsashada in ay sii socon karto, ninka waayeelka ah - wuxuu rajeeyay in uu hoos u dhigi doono. Oo iyana yeel. Xayawaanku waa la lumiyay oo ma soo laaban.
Carruurta maqalka sheekada dareemaya ayaa dareema in ay ka careysiiyeen lamaanaha hore, iyo sida cadhooday guuldaradii aadka u weynaa, sida ay ahayd haweeney old ah oo leh ninkeeda. Waxaa laga yaabaa in dhammaan carruurta ay maqleen sheekada ay qoreen waxa ay sameyn lahaayeen haddii ay haystaan ​​seddexda rabitaan.
Talooyinka caddaaladda ah ee leh inay rabaan, iyo inta badan nacasyada jecel, waxay qayb ka yihiin dhaqanka hiddaha ee ku dhowaad jinsiyad kasta. Carruurta iyo waayeelkooda ayaa laga yaabaa inay is arki karaan, iyo rabitaankooda ay ka muuqdaan Hans Christian Andersen's "Goloshes of Fortune."
A fairy ayaa lahaa laba ka mid ah goloshes taas oo keenaysa in qofkoodu uu mar walba ku qaado gaadiidka wakhtiga iyo goobta iyo xaalad kasta oo uu u rajeeyay. Inkastoo ay doonayaan in ay u hoggaansamaan tartanka bani-aadmiga, cawska ayaa meeleeyay goobo kale oo ka mid ah hareeraha aqal dhisme ah oo ay koox weyn oo soo ururisay oo ay ku doodayeen su'aasha ah in waqtiyada da 'dhexaadku aanay ka fiicnayn leedahay.
Markii uu ka tagay guriga, xildhibaankii abaartii dhexdhexaadiyay wuxuu dhigay Goloshes of Fortune halkii uu iska lahaa oo, weli wuxuu ka fikiray doodiisa markii uu ka soo baxay albaabka, wuxuu isku dayay naftiisa wakhtiyadii King Hans. Markuu dhinto saddex sannadood ayuu socday, oo intuu socday wuxuu aaday cawsduur dabadooda loo mariyey, waayo, waagaas waa la wada xidhay, oo ma jirin jidkii aan marnaba la garanaynin. Tani waa cabsi leh, ayaa sheegay in xildhibaanku, markii uu ku dul jiifiyay dhoobada, iyo sidoo kale, nalalka ayaa dhammaantood soo baxay. Waxa uu isku dayay in uu helo gaadiid si uu u geeyo gurigiisa, laakiin cidna lama joogin. Guryuhu way yar yahiin oo way gari jireen. Ma jiro buundo hadda ka gudubtay webiga. Dadku waxay u dhaqmeen si qarsoodi ah waxayna ahaayeen kuwo dhar qaawan. Isaga oo u maleynaya inuu jiran yahay wuxuu soo galay hudheel. Qaar ka mid ah culimada ayaa ku hawlan wadahadalka. Waxa uu ahaa mid la yaab leh oo ay ka xanaaqeen bandhiggooda jaahilnimada, iyo wax walba oo uu arkay. Tani waa xilligii ugu xumaa ee noloshayda, ayuu yiri markii uu miiska saaran yahay oo isku dayay inuu ka baxsado albaabka, laakiin shirkaddu waxay ku qabatay cagihiisa. Dhibaatadiisa, wadoshoshadu way soo baxday, oo wuxuu isku dayay inuu barto waddo aad u yaqaan, iyo balbalo halkaas oo waardiyihiisu ay si hagaagsan u seexdeen. Ku faraxsan yahay inuu ka baxsado wakhtigii King Hans, xildhibaanku wuxuu qaatay cabsi waxaana lagu degdegay gurigiisa.
Hello, wuxuu yidhi waardiyuhu isagoo soo jeedinaya, waxaa jira been abuur ah oo ka kooban labada garab. Sidee ayay u habboon yihiin, ayuu yidhi, sida uu u leexiyay. Dabadeedna wuxuu eegay dariishaddii kormeerka ahayd ee kor u kacay, waxayna arkeen iftiin, iyo maxbuuska oo kor iyo hoosba. Waa maxay adduunka qadarka ah ee ay tahay, ayuu yiri waardiyaha. Waxaa jira baalal gaaban oo kor iyo hoos qolkiisa saacaddan, marka uu awoodo inuu sidoo kale jiifo sariirta diiran. Waxa uu leeyahay xaas iyo caruur maadaama uu baxo oo uu ku raaxeysto fiidkii kasta. Waa maxay nin faraxsan! Waxaan jeclaan lahaa inaan ahay.
Waardiyuhu markasta ayaa loo dhiibay jidhka waxayna u maleeyeen gawracaha wuxuuna arkay isaga oo ku tiirsan daaqada oo si murugo leh u eegay warqad casaan ah oo uu ku qoray gabay. Waxa uu ku jiray jacayl, laakiin wuxuu ahaa nin miskiin ah mana uusan arkin sida qofkii uu ku dhisay uu jecel yahay in lagu guuleysto. Wuxuu madaxiisa ku tiirsanaa daaqada daaqada oo uu taahidey. Dayaxuna wuxuu ku yaallaa jidhka waardiyaha. Ah, wuxuu ku yidhi, ninkaasi waa ka roon yahay aniga. Ma garanayo waxa ay tahay in la doonayo, sidaan doonayo. Wuxuu leeyahay guri, xaas iyo caruur isaga oo jecel, mana haysto. Ma awoodi karaa, laakiin wuxuu haystaa wax badan, oo wuxuu ku noolaan doonaa noloshiisa oo uu jecel yahay, iyo rajo aan ku kalsoonayn, waa inaan ka roonaadaa marka aan ahay. Waxaan jeclaan lahaa inaan ahay waardiyaha.
Oo wuxuu ku noqday balbaladii macbudka. Oh, waa maxay riyo fool xun oo uu ahaa, ayuu yiri, oo u maleynayaa inaan ahay lataliye aan haysan aniga iyo xaaskeyga, carruurteyda iyo gurigeyga. Waan ku faraxsanahay inaan ahay waardiye. Laakiin wuxuu weli ku jiray goloshes. Wuxuu kor u eegay samada oo wuxuu arkay xiddigta hoos u dhacaysa. Markaasuu u muuqday isagoo indhihiisu furan.
Waa maxay meel qariib ah oo ah dayaxa waa inuu ahaadaa, waa uu tagay. Waxaan jeclaan lahaa in aan arko meelo qariib ah iyo waxyaabo ay tahay in ay halkaas joogaan.
Muddo yar gudahood ayuu la soo qaaday, laakiin wuxuu dareemay meel ka baxsan. Waxyaaluhu maaha sida ay dhulka joogaan, dadkuna ayan garanaynin, sida dhammaantood oo kale, oo uu xanuunsaday. Wuxuu ahaa dayaxa, laakiin jirkiisa wuxuu ku yaalay balastar meeshii uu ka tagay.
Waa maxay saacad, waardiye? waydiistay baasaboor-by. Laakiinse biibiilayaashii baa guracan ka soo baxay, oo waxba kama uu reebin. Dadku way isu soo wada urureen, laakiin way kari waayeen; sidaasi darteed waxay ku qaadeen isbitaalka, dhakhtarradu way u maleeyeen inuu dhintay. Isaga oo diyaarinaya inuu aasayo, waxii ugu horreeyey ee la qabtay waxay ahayd in laga saaro goloshiisa, isla markiiba waardiyuhu wuxuu soo toosay. Waa maxay habeenkii naxdinta leh ee sidan ah, ayuu yiri. Waxaan jeclaan lahaa inaanan waligaa la kulmin. Oo hadduu doonayo inuu wax ku dilo, ma wanaagsana.
Waardiyayaashu way ambabbexeen, laakiinse waxay u carareen xagga galbeed. Hadda, waxaa dhacday in ilaalo tabaruc oo si gaar ah loogu daawaday isbitaalka habeenkii, iyo inkasta oo uu duufaan lahaa, wuxuu doonayay inuu dibedda u baxo. Ma uusan dooneynin inuu albaabka iridda albaabka ogeysiiyo inuu baxo, sidaas darteed wuxuu u maleynayay in uu ku dhex mari lahaa tuugada birta. Waxa uu ku dhajiyay goloshes oo wuxuu isku dayay inuu dhex maro jidadka. Madaxiisu aad ayuu u weynaa. Sidee nasiib darro, ayuu yiri. Waxaan jeclaan lahaa in madaxeydu ay tegi karto marinka. Oo sidaasuu yeelay, laakiin markaas ka dib ayaa jidhkiisii ​​ka soo noqday. Halka uu istaagay, iskuday sidii uu u jeclaan lahaa, jidhkiisa kama helin dhinaca kale ama madaxiisa dib ugusoo laabto. Ma uu ogeyn in goloshoskii uu gashaday uu ahaa Goloshes of Fortune. Waxa uu ku jiray xaalad ba'an, sababtoo ah way ka sii dartay wakhti badan, wuxuuna u maleynayay inuu sugi lahaa barkad jilicsan oo ay ku xanibmeen caruurtii sadaqada iyo dadkii subaxdii tagay. Kadib markii uu ka fekerayay fikradahaas oo dhan, oo isku dayay in uu xor ka dhigo naftiisa oo aan caddayn, waa uu jeclaan lahaa in madaxiisa mar kale bilaash; iyo sidoo kale waxay ahayd. Ka dib markii rabitaan badan oo kale oo keenaya dhib badan, tabaruce ayaa ka takhalusay Goloshes of Fortune.
Goobahaas waxaa loo qaaday saldhigga bilayska, halkaasoo ay ku qalqaalinayeen naftooda, karraaniga nuqulku waxa uu ku dhajiyay oo ku soo baxay. Ka dib markii uu naftiisa jecel yahay gabay iyo lakab, oo uu la kulmay fikradaha iyo dhaleecooyinka gabayada, iyo dareenka lafdhabarta beeraha iyo maxaabiis, wuxuu ugu dambeyntii u rajeeyay oo wuxuu isku helay miiskiisa gurigiisa.
Laakiin sida ugu fiican ee Goloshes of Fortune keentay arday da 'yar oo fiqiga, oo ku dhejiyey albaabka dukaanka nuqulkii subixii ka dib markii uu waayo-aragnimo ah gabay iyo lark.
Ku soo gudub, ayaa sheegay in karraaniga nuqulku yahay. Subax wanaagsan, ayaa sheegay in ardaygu. Waa subaxdii ammaanta, waana inaan jeclahay inaan tago beerta, laakiin cawsku wuu qoyan yahay. Ma awoodaa inaan isticmaalo golosheskaaga? Dhab ahaantii, ayaa sheegay in karraaniga nuqulku yahay, iyo ardaygu ku riday.
Beerkiisa, aragtida ardayga waxaa ku xayiray darbiyada dhuuban ee ku yaal. Waxay ahayd maalin qurux guga ah fekerkiisa ayaa u jeestay in uu u safro waddamada uu jecel yahay inuu arko, oo uu si qumman u qayliyey, Oh, waxaan jeclaan lahaa inaan u socdaalay Switzerland, iyo Talyaaniga, iyo. - Laakiin ma rabin inuu sii dheeraado, sababtoo ah markiiba ayuu isku dayay tababaraha marxaladaha kale ee safarka ah, ee buuraha Switzerland. Waxa uu ahaa mid gaabis ah oo xanuunsan oo ka cabsada baqdinta baasaboor, lacag iyo waxyaabo kale, waana qabow. Tani waa mid aad uwanaagsan, ayuu yidhi. Waxaan jeclaan lahaa inaan joognay dhinaca kale ee buurta, Talyaaniga, halkaasoo ay diirran tahay. Oo, hubaal ku filan, waxay ahaayeen.
Ubaxyada, dhirta, shimbiraha, harooyinka qurxinta ee ku wareegsan beeraha, buuraha soo koraya dhinaca dhinaca fog, iyo qorraxda dahabiga ah ee lagu nasto sharafta oo dhan, waxay ka dhigtay aragti cajiib ah. Hase yeeshee, waxay ahayd boodh, diirimaad iyo qoyan ee tababaraha. Duufaan iyo dabacsanaan ayaa dhammaantood raacaya rakaabkii waxayna sababeen wejiyo weyn; oo calooshayduna madhalays bay lahaayeen, oo jidhkiisiina way madoobaadeen. Dumar badan oo salka ku haya oo bareegay waxay ku hareerareen waddooyinkoodii waxayna raaceen aqalka saboolka ah iyo kuwa keli ah ee ay joojiyeen. Waxay ku dhacdey waxyaabo badan oo ardayga ah si ay u ilaaliyaan daawashada inta rakaabyadii kale la seexday, haddii kale way dhaceen dhammaantoodba. Inkasta oo cayayaanka iyo urka ka xumaaday, ardaygu wuxuu u nuuxnuuxsaday. Socdaalku wuxuu noqon lahaa mid aad u fiican, wuxuu yidhi, ma ahayn mid jidhkiisa. Meel kasta oo aan tago ama wax kasta oo aan samayn karo, weli waxaa jira rabitaankayga wadnahayga. Waa inay noqotaa jirka oo ka hortagaya helitaankaan. Miyuu jidhkayga ku nastay oo maskaxdayda xorta ah waa inaan shaki la'aan helaa yoolal farxad leh. Waxaan jeclaan lahaa in ugu dambeyntii ugu fiicnayd.
Kadibna wuxuu isku helay gurigiisa. Daahyarada ayaa la soo qaaday. Bartamaha qolkiisa wuxuu istaagay foorno. Oo wuxuu ku jiifsaday dhimashada hurda. Jidhkiisu wuxuu ahaa nasasho iyo niyadjabkiisa.
Qolka wuxuu ahaa laba qaab oo si deggan u dhaqdhaqaaqa. Waxay ahaayeen Caajisnimada Wanaagsan ee keenay Goloshes of Fortune, iyo kale oo caan ah loo yaqaan Care.
Bal eeg, maxaa farxad leh baa laydiin geeyey? ayaa sheegay in Daryeelka.
Hase yeeshee, waxay ka faa'iideysteen kuwa halkan jiifa, waxay ku jawaabeen raxanka farxada.
Maya, ayaa sheegay in Daryeelka, ayuu naftiisa u baxay. Looma yeedhin. Waxaan isaga ku samayn doonaa raallinimo.
Waxay ka qaadday calaamad ka cagaheeda iyo ardayguna toosay oo kor u kacay. Carmalku wuu ka lumay, oo wuxuu la socday Goloshes of Fortune.
Waxaa nasiib daro ah in dadku aysan lahayn Goloshes of Fortune, haddii kale waxay u keeni karaan nasiib daran iyaga naftooda iyaga oo xiran iyaga iyo rabitaankooda ay jecel yihiin ka dhaqsaha badan sharciga oo aanu ku noolaanno.
Marka carruurtu, qayb weyn oo nolosheena ah ayaa loo soo direy. Noloshooda dambe, marka xukunka loo maleynayo in uu yahay mid qaan gaar ah, sida lamaanaha waayeelka ah iyo kuwa xiran ee goloshes, waxay waqti badan ku qaataan rabitaanka, qanacsanaanta iyo niyadjabka, waxyaalaha aan helnay iyo wixii aan u rajeyneynay, waayo, ma aydnaan damcin nacas kale.
Dumarka ayaa guud ahaan loo aqoonsan yahay inay yihiin kuwo aan caqli-gal ahayn, oo qaar badani waxay u maleynayaan in rabitaanka aan la raacin waxyaabihii la rajeynayey oo aan saameyn ku yeelan noloshooda. Laakiin kuwani waa fikrado qaldan. Doonista waxay saameyn ku yeelataa nolosheena, waana muhiim inaan ogaano sida ra'yiga doonaya oo wax u keeni kara saameynaha nolosheena. Dadka qaar ayaa saameyn ku leh rabitaankooda marka loo eego kuwa kale. Farqiga u dhaxeeya natiijada dareenka hal qof oo ka mid ah rabitaanka qof kale waxay kuxirantahay awood la'aanta ama awoodda yar ee fikradiisa, miisaanka iyo tayada rabitaankiisa, iyo asalka asalka iyo fekerka taariikhda uu sameeyay.
Doonista waa ciyaar lagu fekerayo maskaxda iyo rabitaanka hareeraha sheyga rabitaankiisa. Rajadu waa rabitaanka wadnaha oo muujinaya. Doonista way ka duwan tahay doorashada iyo xulashada. Doorashada iyo xulashada wax waxay ubaahan tahay isbarbardhiga fikirka u dhaxeeya isaga iyo wax kale, iyo natiijooyinka doorashada ee wax loo xushay waxyaabo kale oo la barbardhigay. Doonida, rabitaanku wuxuu u jeedaa fikradda ujeedada qaarkood ee ay ku qabato, iyada oo aan la joojin si loo barbardhigo wax kale. Rajada loo muujiyay waa shaygaas oo lagu riyaaqay rabitaan. Doontu waxay helaysaa xooggeeda, waxayna ku dhalatay rabitaan, laakiin waxay ku fikirtay inay foomka bixiso.
Kii fekerkiisu wax u taro intuusan hadlo ayuu ku hadlaa, oo hadalkay maqlaanba ma wanaagsana inuu ka daba ordo sida ka hadlidda ka hor iyo malaa'igta; Xaqiiqdii, qofkii waayeelka ah ee waayo-aragnimo leh oo ka faa'iidaystay waayo-aragnimadiisa ayaa aad u yaraa. Waxyaabaha ku jira dugsiga nolosha, waxaad ku faraxsan tahay inaad jeceshahay. Nolosha dad badani waa geedi socodka rabitaanka, iyo calaamadaha noloshooda, sida hantida, qoyska, saaxiibada, meesha, booska, duruufta iyo xaaladaha, waa qaabab iyo dhacdooyin marxalado isdaba-joog ah sida natiijooyinka ay doonayaan.
Duminta waxay ka welwelsan tahay dhammaan waxyaabihii u muuqda kuwo soo jiidasho leh, sida inay ka takhalusaan xakamaynta la aaminsan yahay, ama helitaanka xajmiga, ama inay noqdaan milkiilaha hantida weyn iyo hantida, ama si ay u ciyaaraan qayb muuqaal ah ka hor intaan la eegin indhaha dadweynaha, iyo tan oo dhan iyada oo aan lahayn qorshe cad oo ficil ah. Xiisadaha ugu caansan waa kuwa la xidhiidha jirkooda iyo rabitaankooda, sida rabitaanka maqaal ka mid ah cuntada, ama si aad u hesho qadar yar, rabitaanka giraan, dahabka, dharka dhogorta, dharka, jaakad, in uu leeyahay dareen macquul ah, inuu leeyahay baabuur, doon, guri; iyo rabitaankani waxay u fidiyaan dadka kale, sida rabitaanka la jecel yahay, loo xishoodo, loo ixtiraamo, inay caan ku noqdaan, iyo in ay ka faa'iidaystaan ​​adduunka kale. Laakiin sida ugu badan ee qofku helo waxa uu rabo, wuxuu ogaadaa in waxaas uusan si buuxda u qancin oo uu jecel yahay wax kale.
Kuwa iyagu khibrad gaar ah u leh rajooyinka dunidan iyo jidhkaba, oo ay u helaan inay noqdaan kuwo xayawaan ah oo aan lagu kalsoonaan karin xitaa marka la helo, waxay rabaan inay diirada saaraan, inay is-xakameeyaan, inay noqdaan kuwo fican oo caqli leh. Markuu qofku jeclaado mawduucaas oo kale, wuxuu joojiyaa rabitaanka iyo isku dayaa inuu ku kasbado kuwan adoo samaynaya waxa uu u malaynayo inuu horumar ku fiicnaado oo uu keeno xigmad.
Nooc kale oo dookha ayaa ah mid aan waxba ka qabin shakhsiyad gaar ah, laakiin wuxuu la xiriiraa dadka kale, sida raba in qof kale uu ka soo kabsado caafimaadkiisa, ama uu hantidiisa, ama uu ku guulaysto ganacsigii ganacsiga, ama inuu helo isku-kalsoonaan iyo inaad awood u yeelatid inaad dabeecisid dabeecaddiisa iyo horumarinta maskaxda.
Dhammaan noocyada rabitaankani waxay leeyihiin saameyn iyo saameyn gaar ah, kuwaas oo lagu go'aamiyo mugga iyo tayada rabitaanka, tayada iyo awoodda maskaxdiisa, iyo xoogga la siiyo kuwan la siiyo fekerkiisa iyo ficiladii hore ee muujinaya rajadiisa hadda mustaqbalka.
Waxaa jira qaab dabacsan ama caruureed oo jecel, iyo habka ka weyn oo loo yaqaan 'scientific'. Habka foosha ugu jiraa waa mid ka mid ah raba in uu wax ka qabto maskaxdiisa miyirkiisu uu ku dhaco, ama waxa uu ku fekerayo fikraddiisu ay tahay dareenkiisa iyo rabitaankiisa. Wuxuu jecel yahay baabuur, riwaayad, malaayiin doolar, guri wayn oo magaalada ah, hanti ballaaran oo dalka ka mid ah, isla markaana marka la jecel yahay sanduuqyada sigaarka, iyo saaxiibkiisa Tom Jones isaga bixin doono booqo fiidka. Ma jiro wax sax ah oo ku saabsan qaabkiisa ama dabacsanaankiisa uu jecel yahay. Mid ka mid ah kuwa indho-galka ah waxay u egtahay inay rabto wax kasta oo sheyga ah sida wax kale. Wuxuu ka soo jiidayaa midba midka kale iyada oo aan la qabsan karin fikirka ama habka uu ku shaqeeyo.
Mararka qaarkood dookha dabacsan ayaa si weyn ugu wareersanaa banaanka, oo dhulkaas wuxuu bilaabaa inuu jecel yahay oo uu daawado dhismaha qalcigiisa, ka dibna wuxuu jecel yahay nooc kale oo nolol ah oo leh duufaan marka uu daaqada ku dulmarayo dabadiisa, digaagga oo u fiirsanaya caqli, kadibna wuxuu boodi doonaa qaybta xigta oo uu bilaabi doonaa inuu shariisto. Noocaan noocan oo kale ah ayaa la sameeyaa marka la barbardhigo kala bar.
Mid ka mid ah oo isku dayaya inuu codsado habka uu jecel yahay, wuxuu si buuxda u dareemayaa oo uu ka warqabaa waxa uu doonayo iyo wixii uu rabo Marka la eego rabitaanka dabacsan, wuxuu jecel yahay inuu ka bilaabo wax uu jecel yahay inuu doonayo. Laakiin isaga waxaa la kori doona baqtigeeda si aad u qeexan. Dabadeedna wuxuu bilaabi doonaa inuu gaajo u noqdo, oo uu damacsan yahay inuu dego degenaansho joogta ah oo doonaya inuu jecelyahay oo uu dalbado inuu fuliyo rabitaankiisa, sida ay sheegtey waxa loo yaqaan " "Fikirka habdhaqankiisa wuxuu caadi ahaan ku dhacaa nidaamka cusub ee fikirka, taas oo ah, inuu sheego rabitaankiisa iyo inuu u yeero oo uu dalbado sharciga uu ka soo horjeeda dhammaystirkiisa. Dacwadiisu waa in uu jiro caalamka oo dhan wax walba oo dhan, iyo in ay xaq u leedahay in ay ka soo wacaan badan oo qayb ka mid ah oo uu rabo iyo hadda uu sheeganayo sheegashada.
Markii uu sheeganayay xaqiisa iyo sheegashadiisa ayuu sii waday doonistiisa. Tani waxa uu ku sameeyaa xannibaad joogto ah oo xishood ah oo uu ku raali galinayo rabitaankiisa, oo uu si joogta ah uga soo jiiday rabitaankiisa oo uu ka fekeray in uu si ballaadhan u helo baahi badan, illaa iyo inta uu rabitaanku ka soo baxay rabitaankiisa waxa uu ahaa qadar buuxa. Ma ahan mid aan haboonayn, sida uu qabo qaabka cusub ee fikradda ah, wuxuu rabaa inuu raalligeliyo, inkasta oo uu dhif yahay haddii uu helo wax uun oo uu u rajeeyay, iyo habka uu u rajeeyay. Xaqiiqdii, qaabka uu soo socdo badanaa wuxuu keenaa murugo aad u badan, wuxuuna rajeynayaa inuusan u rajeyneynin, halkii uu ka xumaan lahaa belaayada taas oo ay soo jiidatay helitaanka arinkan.
Tusaale ahaan nacasnimada rabitaanka joogtada ah ee kuwa raba inay ogaadaan, laakiin kuwa jaahil ka ah sharciga, waa kuwan soo socda:
Hadal qoraal ah oo ku saabsan nacasnimada jacaylka iyo ka soo horjeeda hababka dalbashada iyo doonista kuwaas oo ka doodaya qaar badan oo ka mid ah calaamadihii cusub, mid ka mid ah dhageystey xiisaha ayaa yiri: "Ma aqbalo afhayeenka. Waxaan aaminsanahay inaan xaq u leeyahay inaan rabo wax kasta oo aan doonayo. Waxaan rabaa kaliya laba kun oo doolar, waxaanan aaminsanahay haddii aan rabo inaan ku sii wato waxaan heli doonaa. "" Madam, "ayaa ugu jawaabay markii ugu horeysay," cidina kaama horjoogsan karto inaad dooneyso, laakiin ha ahaato mid deg deg ah. Dad badan ayaa sababay in ay ka qoomamoodaan rabitaankooda sababtoo ah waxa ay doonayeen in ay heleen. "" Anigu maaha fikraddaada, "ayay tiri. "Waxaan aaminsanahay sharciga caqliga. Waan ogahay kuwa kale ee sharcigan ka dalbaday, oo ka soo baxday badhkii caalamka ee ay rabeen ayaa la dhammaystiray. Anigu ma daneeyo sida ay u timaado, laakiin waxaan rabaa laba kun oo doolar. Dhawr bilood ka dib ayay ku soo laabatay, iyada oo ogeysiiskeeda wajiga caruurnimada ah, mid ka mid ah kuwii ay ka hadashay: "Madam, miyaad heshay rabitaankaaga?" "Waxaan ku kalsoonahay, waanan ku kalsoonahay, Waan sameeyay, "ayay tidhi. Markaasuu ku yidhi, Ma waxaad doonaysaa inaad jacayl ku socotid? "Maya," ayay ku jawaabtay. "Laakiin hadda waan ogahay in ra'yigayga aan caqli ahayn." "Sidee ayuu sidaas?" Ayuu ku jawaabay. "Waa hagaag," ayay tidhi. "Ninkeygu wuxuu caymis ku lahaa noloshiisa laba kun oo doolar. Waa caymiskiisa aan helay. "
(In la soo gabagabeeyo arrinka Janaayo ee Ereyga.)